Cashada Rabbiga, Kaniisadda Adduunka ee Ilaah Switzerland (WKG)
Cashada Rabbiga ayaa ah xusuusta wixii Ciise hore u qabtay, oo calaamad u ah xidhiidhka aynu hadda la leennahay, iyo ballanka waxa uu samayn doono mustaqbalka. Markasta oo aan u dabaaldegno karaamada, waxaan ku qaadnaa kibis iyo khamri anoo xasuusna badbaadiyaheena oo aan ku dhawaaqi doono dhimashadiisa ilaa uu yimaado. Karaamadu waa ka qaybqaadashada dhimashada iyo sarakicista Rabbigeenna, oo isagu siiyay jidhkiisii ​​oo dhiiggiisa daadshay si aan cafinno. (1 Korintos 11,23: 26-10,16; 26,26:28; Matayos XNUMX: XNUMX-XNUMX)
Quduusku wuxuu ina xusuusinayaa dhimashadii Ciise iskutallaabta dusheeda
Fiidnimadii ayaa la gacangeliyey intii Ciise xertiisu wax la cunayay, oo uu haddana kibis qaatay, oo wuxuu yidhi, Tanu waa jidhkayga laydin siin doono, taasi waxay ku dhacdaa xusuustayda ”(Luukos 22,19:XNUMX). Midkood kastaaba wuxuu cunay xabbad kibis ah. Markii aan xaadirinno Cashada Rabbiga, midkeen kasta wuxuu cunaa xabbad kibis ah oo lagu xusuusto ciise.
"Sidoo kale, chalice ka dib cuntada ayaa nagu yidhi: Dambiilahan waa axdiga cusub ee dhiiggayga oo laydiin daadin doono" (aayadda 20). Markaan kuusoo qaadno koob khamri ah oo ku jira karaamada, waxaan xasuusnaano in dhiiggii Ciise inagu daadshay annaga, iyo in dhiiggan uu tilmamay axdiga cusub. Sida axdigii hore lagu shaabadeeyey ku rushaynta dhiigga, axdiga cusub waxaa lagu aasaasay dhiigga Ciise (Cibraaniyada 9,18: 28-XNUMX).
Sidii Bawlos yidhi: "In alla intii aad kibistan cuntaan oo aad dhiigtaan cabtaan, waxaad u naadisaan dhimashada Rabbiga ilaa uu yimaado" (1 Korintos 11,26:XNUMX). Cashada Rabbiga ayaa dib u fiirisa dhimashadii Ciise Masiix iskutallaabta dusheeda.
Dhimashadii Ciise ma wax wanaagsan baa mise waa wax xun? Dhab ahaantii waxaa jira dhinacyo aad u murugo leh oo ku saabsan dhimashadiisa, laakiin sawirka weyn ayaa ah in dhimashadiisu ay tahay warka ugu wanaagsan ee jira. Waxay ina tusinaysaa sida uu Ilaahay noo jecel yahay - inbadan oo uu u soo diray wiilkiisa si uu noogu dhinto si dembiyadeenna loo cafiyo oo aan ula noolaano weligiis.
Dhimashadii Ciise waa hadiyad aad u weyn innaga. Waa qaali. Haddii naloo siiyo hadiyad qiimo weyn leh, hadiyad ay kujirto allabari weyn innaga, sidee ayaynu u heli karnaa? Niyad jab iyo qoomamo? Maya, taasi maahan waxa qofka wax siiyaa uu doonayo. Hase yeeshe, waa inaan ku aqbalnaa mahadnaq weyn, oo ah muujinta jacayl weyn. Haddii aan ilmada daadinno, waa inay ahaato ilmo farxad ah.
Haddaba cashada Rabbiga, in kasta oo ay tahay xusuusta dhimashada, maahan aasitaan sidii Ciise weli dhimashadiisa. Taas bedelkeeda - waxaan u dabaaldegaynaa xusuustaas annagoo og in dhimashadii Ciise ay qaadatay saddex maalmood oo keliya - annagoo og in dhimashadu weligeed na qaban doontid. Waxaan ku faraxsanahay inuu Ciise ka adkaaday dhimashada oo uu siidaayay dhammaan kuwa adoonsiga ka ahaa cabsida dhimashada (Cibraaniyada 2,14: 15-16,20). Waxaan ku xasuusan karnaa dhimashadii Ciise aqoontii farxadda badneyd ee uu kaga guuleystey dembiga iyo dhimashada! Ciise wuxuu yidhi murugadeena waxay isu bedeshaa farxad (Yooxanaa XNUMX:XNUMX). Imaatinka miiska Rabbiga iyo yeelashada wehelku waa inay ahaataa xaflad, ma aha aaska.
Reer banii Israa’iil ee qadiimka ahaa waxay dib u fiiriyeen dhacdooyinka Kormaridda inay tahay xilli qeexan oo taariikhdooda ah, waqtigaas oo aqoonsigooda qaran yahay. Waxay ahayd markii ay gacanta xoogga Ilaah ka baxsatay dhimashada iyo addoonsiga oo loo xoreeyay inay Rabbiga u adeegaan. Kaniisadda masiixiga, waxaan dib u milicsaneynnaa dhacdooyinka ku saabsan iskutallaabta lagu qodbay iyo sarakicidda Ciise oo ah waqtiga qeexaya taariikhdeena. Waxaan ka baxnaa dhimashada iyo addoonsiga dembiga, oo waxaa naloo xoreeyay inaannu Rabbiga u adeegno. Cashada Rabbiga ayaa ah xusuusta xilligan qeexan ee taariikhdeena.
Cashada Rabbiga ayaa tilmaamaysa xiriirka aan la leenahay Ciise Masiix
Iskutallaabta lagu qodbay Ciise wuxuu u leeyahay macnaha sii socda dhammaan kuwa iskutallaabta iskutallaab ku qaaday inay isaga raacaan. Waxaan sii wadnaa inaan la wadaagno dhimashadiisa iyo axdi cusub maxaa yeelay nolosha ayaan wada wadaagnaa. Bawlos wuxuu qoray: “Koobka barakada leh ee aynu u ducaynay miyaanu ahayn beeshii dhiigga Masiix? Miyaanay ahayn kibistii jebinaysa wadajirka jidhka Masiix? (1 Korintos 10,16:XNUMX). Imanka Cashada Rabbiga waxaan ku muujineynaa inaan wadaagno Ciise Masiix. Waxaan leenahay wehelnimo isaga. Waan ku midaysanahay isaga.
Axdiga Cusubi wuxuu ka hadlayaa kaqaybgalkayaga Ciise siyaabo kaladuwan. Waxaan la wadaagnaa iskutallaabtiisa (Gal 2,20; Kolos 2,20), dhimashadiisa (Rom 6,4), sarakiciddiisa (Ef 2,6; Kolos 2,13; 3,1) iyo noloshiisa (Gal 2,20 , XNUMX). Noloshaydu isagay ku jirtaa isaga isaguna wuu inagu jiraa. Cashada Rabbiga ayaa tilmaamaysa xaqiiqadan ruuxiga ah.
Cutubka 6aad ee Injiilka Yooxanaa wuxuu ina siinayaa sawir la mid ah. Ka dib markuu Ciise naftiisa ku dhawaaqay "cuntada nolosha", wuxuu yidhi: "Ku alla kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga cabba wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, oo maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa" (Yooxanaa 6,54). Waa muhiim inaan helno cuntadeena ruuxiga ah ee Ciise Masiix. Cashada Rabbiga ayaa muujinaysa run this socda. “Ku alla kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga cabba wuu igu jiraa, anna waan ku jiraa isaga” (aayadda 56). Waxaan tusinaynaa inaan ku nool nahay Masiixa iyo isaguna innaga.
Markaa cashada Rabbiga ayaa naga caawisa inaan fiirinno Masiixa, oo waxaan ogaanay in nolosha dhabta ahi ay ku jiri karto oo kula joogi karto isaga.
Laakiin markii aan ka warqabno inuu Ciise inagu dhex nool yahay, waxaan sidoo kale joogsaneynaa oo ka fikirnaa nooca guriga aan isaga siinno. Ka hor intaanu u soo gelin nolosheenna waxaan ahayn hoyga dembiga. Ciise wuu garanayay tan kahor intuusan xitaa albaabka nolosheena garaacin. Wuxuu doonayaa inuu soo galo si uu u bilaabo nadiifinta. Laakiin markuu Ciise albaabka garaaco, dad badani waxay isku dayaan inay dhaqso u nadiifiyaan ka hor intuusan albaabka furin. Sikastaba ha noqotee, hadaanu nahay bini’aadamka ma awoodno inaan nadiifinno dambiyadayada - waxa ugu fiican ee aan sameyn karno waa inaan ku qarin karno armaajo.
Markaa waxaan ku qarinaa dambiyadayada qolka jiifka waxaanan ku casuumay Ciise qolka fadhiga. Ugu dambeyntii jikada, ka dib qolka jiifka, iyo qolka jiifka. Waa geedi socod tartiib tartiib ah. Ugu dambeyntiina, Ciise wuxuu imanayaa qolka dambiyadayada ugu xun ku dhuumanayaan oo isagana nadiifiyaa iyaga. Sannad ilaa sannad markii aan ku barbaarno qaan gaadh xagga ruuxa ah, waxaan noloshooda ugu soo dhiibaynaa Badbaadiyeheenna.
Waa geedi socod oo Cashada Rabbiga ayaa door ka cayaarta hanaankan. Bawlos wuxuu qoray: "Dadku is imtixaamo, oo isagu kibistuu ka cunaa oo uu cabbayaa koobkan" (1 Korintos 11,28:XNUMX). Markasta oo aan kaqaybqaadanaano, waa inaan iska hubinaa nafteena, anagoo ka war qabna muhiimadda weyn ee xafladan loo leeyahay.
Markaan is tijaabinno, badiyaa waxaan helnaa dembi. Tani waa caadi - ma jirto sabab looga fogaado Cashada Rabbiga. Kaliya waa xusuusinta in aan u baahan nahay Ciise ee nolosheena. Isaga oo keliya ayaa dembiyadayada naga qaadi kara.
Bawlos wuxuu ku dhaleeceeyey Masiixiyiinta ku sugan Korintos habka ay ugu dabaaldegeen Cashada Rabbiga. Ninkii hodanka ahaa ayaa yimid markii ugu horraysay, oo waxay cuneen wixii ay ka dhergeen oo ay khamri cabeen. Xubnaha miskiinka ahi way dhammaadeen oo way gaajoodeen. Taajirku ma uusan wadaagin masaakiinta (aayadaha 20-22). Xaqiiqdii iyagu nolosha Masiixa ma aysan wadaagin maxaa yeelay ma aysan sameyn wixii uu yeeli lahaa. Iyagu ma ay fahmin waxa ay ka dhigan tahay in xubno ka mid ah jidhka Masiixa iyo in xubnahu ay mas'uul ka ahaayeen midba midka kale.
Markaa inta aan is-imtixaaneyno, waxaan u baahan nahay inaan eegno si aan u eegno bal inaan isu daaweynno midba midka kale siduu Ciise Masiix ku faray. Haddii aad Masiixa la mid tihiin oo aan Masiixa ku midaysanahay, markaas runtii innagu waynu isku xidhan nahay. Markaa Cashada Rabbiga, oo tilmaamaysa ka-qaybgalkeenna Masiixa, ayaa sidoo kale calaamad u ah ka-qaybgalkeenna midba midka kale (tarjumaadaha kale waxay ugu yeedhaan wadaag ama wadaag ama wadaagis).
Siduu Bawlos ku yidhi 1 Korintos 10,17:XNUMX, “Sababtoo ah waxaa jira kibis; innagu waxaynu nahay jidh qudha, maxaa yeelay kulligeen innagu kibis qudha ayaan wada wadaagnaa. waa isku jidh oo Masiixa ku dhex jira, isku xidhan, isku mas'uul ah.
Cashada cashadii u dambeysay ee Ciise iyo xertiisii, Ciise wuxuu matalaa nolosha boqortooyada Eebbe cagacihii xertiisii ​​(Jn 13,1: 15-XNUMX). Markuu Butros mudaaharaaday, Ciise wuxuu yidhi waxaa lagama maarmaan ah isaga inuu cagihiisa dhaqo. Nolosha masiixiga waxay ka kooban tahay labadaba - u adeegidda iyo u adeegidda.
Cashada Rabbiga ayaa ina xusuusineysa soo laabashadii Ciise
Saddexda Qorayaasha Injiil waxay noo sheegeen in Ciise uusan cabi doonin midhaha geedka canabka ilaa uu ka buuxsamo buuxinta boqortooyada Ilaah (Mt 26,29:22,18; Luukos 14,25:1; Markos 11,26:XNUMX). Markasta oo aan kaqaybqaadanaano, waxaa nalagu xasuusinayaa balan qaadkii Ciise. Waxaa jiri doona "xaflad weyn" oo ah "aroos", oo ah "cuntada arooska". Rootida iyo khamriga waa "tusaalooyin" waxa ay noqon doonaan dabaaldega guusha ugu weyn taariikhda. Bawlos wuxuu qoray: "In alla intii aad kibistan cuntaan oo aad cabtaan koobkan, waxaad sheegtaan dhimashada Rabbiga ilaa uu yimaado" (XNUMX Korintos XNUMX:XNUMX).
Had iyo jeer waxaan eegnaa hore, sidoo kale gadaal iyo gadaal, gudaha iyo hareeraheenna. Cashada Rabbiga waa mid aad muhiim u ah. Taasi waa sababtaas ay u ahayd qayb caan ka ah dhaqanka Masiixiyada qarniyo badan. Dabcan, mararka qaarkood waxaa loo rogay dhaqan aan nooleyn oo caado ka badan ka dabaaldegga macnaha qotada dheer. Marka dhaqanku noqdo wax aan micno lahayn, dadka qaarkii ayaa xanaaq badan markay joojiyaan dhaqanku gabi ahaanba. Jawaabta ugu fiican ayaa ah in la soo celiyo macnaha. Taasi waa sababta ay nooga caawinayso inaan dib uga fikirno waxa aan u sameysanno si calaamad ahaan ah.